Uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi - iSiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Uhlelo Lokulawulwa Kwekhwalithi
I-XY Tower ithenjiswa ukuthi izoletha umsebenzi wobuchwepheshe kumakhasimende ethu. Uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi lungenye yezinqubomgomo eziyinhloko ze-XY Tower. Ukuze usebenzise uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi, i-XY Tower iqinisekisa ukuthi zonke izinsizakusebenza nokuqeqeshwa kuyanikezwa futhi bonke abasebenzi babamba iqhaza elibonakalayo ekusebenzeni koHlelo Lokulawulwa Kwekhwalithi.
Kwi-XY Tower, ikhwalithi uhambo hhayi indawo. Ngakho-ke, inhloso yethu ukugcina amaklayenti ethu ngokukhiqiza izinto ezisezingeni eliphansi zomhlaba, imibhoshongo yokudlulisa, imibhoshongo yezingcingo, izakhiwo zesitishi kanye nezinsimbi zensimbi ngamanani okuncintisana nokuqinisekisa ukulethwa okufika ngesikhathi.
Ukuba yingxenye ebalulekile yenqubo yokukhiqiza, ikhwalithi iyaqinisekiswa ngokuya ngamazinga e-ISO. Uhlelo lwe-XY Tower Quality Management luqinisekiswe nge-ISO 9001: 2015, ISO14001, ISO451001, ISO1461.
Abaphathi beXY Tower bazibophezele ekusebenziseni zonke izici zebhizinisi kulawo mazinga ahlinzeka ngosizo oluhle kakhulu kuwo wonke amaklayenti. Lokhu kusekelwa yisitayela sokuphatha esiqhubekayo esikhuthaza isiko lekhwalithi kuyo yonke inkampani.
Abaphathi bazibophezele ekwenzeni ngcono okuqhubekayo kokuphathwa kwekhwalithi. Lokhu kwenzelwa ukuqinisekisa ukuthi inkampani isebenza kahle nangendlela efanele futhi ihlangabezana nezidingo zamakhasimende ethu.
I-QA / QC iphethwe ngabahloli abaqeqeshwe kahle abasebenzisa imishini yokuhlola yesimanje ukuqinisekisa amazinga asezingeni eliphakeme nokuqeda kahle. Lo mnyango uholwa yi-CEO yethu ngqo.
Umsebenzi weQA / QC uqinisekisa ukuthi zonke izinto zokusetshenziswa zihambisana namazinga we-ISO noma ukucaciswa okujwayelekile okudingekayo ngamakhasimende. Imisebenzi yokulawulwa kwekhwalithi iqala kusukela kokungavuthiwe ngokusebenzisa ubuqili nokusansimbi kuze kufike ukuthunyelwa kokugcina. Futhi yonke imisebenzi yokuhlola izorekhodwa kahle kuLuhlu Lokuhlola Lokubumbela.
I-QA / QC iyindlela yokugcina ikhwalithi. Ukusungula isiko lekhwalithi kuyo yonke inkampani kubaluleke kakhulu. Abaphathi bakholelwa ukuthi ikhwalithi yomkhiqizo ayincikile emnyangweni weQA / QC, kunqunywa yibo bonke abasebenzi. Ngakho-ke, bonke abasebenzi bazisiwe ngokuzibophezela ekuphatheni kule nqubomgomo ikakhulukazi kanye nekhwalithi jikelele futhi bayakhuthazwa ukuthi bakhombise ukuxhasa kwabo uhlelo ngokuzibandakanya okuqhubekayo okuqhubekayo.